ओलीबारे देउवाको टिप्पणी : छुद्र भाषा बोल्नेले के देश चलाउँछ ? (भिडियो) – Nepal Press
ओलीबारे देउवाको टिप्पणी : छुद्र भाषा बोल्नेले के देश चलाउँछ ? (भिडियो)
२०७८ असार १४ गते २०:१८
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमाथि छुद्र भाषा बोल्ने मान्छेले देश चलाउन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार एक कार्यक्रममा देउवालाई लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता छोडेर प्रचण्डपथमा हिँडेको आरोप लगाएका थिए ।
ओलीलाई जवाफ दिँदै विपक्षी गठवन्धनद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा देउवाले भने, ‘रेस्पेक्ट गर्न सक्ने व्यक्तिले देश बनाउँछ । छुद्र भाषामा बोलेर केही हुँदैन । छुद्र भाषा बोल्ने मान्छेले के देश चलाउँछ ?’
देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई नै समाप्त पारेको आरोप लगाए । आफूले बहुमत पुर्याएर प्रस्ताव लैजादा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर ओलीको कार्यकर्ता बनेको उनको आरोप थियो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था अदालत भएको र न्यायालयको निस्पक्षता तथा स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने देउवाले उल्लेख गरे । उनले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै अदालतको फैसला आउनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको बताए ।
प्रकाशित: २०७८ असार १४ गते २०:१८